विमान दुर्घटनाअघि पाइलटले के भन्छन् ? यस्ता छन् ब्ल्याक बक्सका रेकर्ड | Dainik Sanjal
Home विज्ञान/प्रविधि विमान दुर्घटनाअघि पाइलटले के भन्छन् ? यस्ता छन् ब्ल्याक बक्सका रेकर्ड
विमान दुर्घटनाअघि पाइलटले के भन्छन् ? यस्ता छन् ब्ल्याक बक्सका रेकर्ड
विमानको अन्तिम दुई घण्टाको आवाज ब्ल्याक बक्समा रेकर्ड हुन्छ । त्यहाँ इन्जिनको आवाज, आपतकालीन अर्लामको आवाज, क्याबिनको आवाज अनि ककपिटको आवाज रेकर्ड हुन्छ । र, त्यसबाट के थाहा हुन्छ भने, दुर्घटनाका बेला जहाजमा कस्तो माहौल थियो । पाइलटहरुले के कस्तो कुरा गरेका थिए ?
‘ब्ल्याक बक्स’ कालो रंगको भएर भनिएको होइन । बरु यो बाकसको रंग चाहिँ कालो नभएर सुन्तले हुन्छ । पहेंलो बट्टाको नाम ब्ल्याक कब्स राख्नमा पत्रकारहरुको भूमिका छ ।